I-Sigma ibonisa i-Sigma fp Ikhamera epheleleyo yeKhokhethi engenakuso; Uzisa i-High-Performance Lens Series yeeNkqubo zeNkcazo ezingagqibekanga zeKhamera zeNkcazo-NAB Bonisa iindaba nge-Broadcast Beat, i-Broadcastaster ye-NAB Show Show - NAB Bonisa LIVE
ikhaya » iindaba » I-Sigma ibonisa i-Sigma fp Ikhamera epheleleyo yeKhokhethi engenakuso; Uzisa i-High-Performance Lens Series yeeNkqubo zeKhamera eziKhatywayo
I-Sigma ibonisa i-Sigma fp Ikhamera epheleleyo yeKhokhethi engenakuso; Uzisa i-High-Performance Lens Series yeeNkqubo zeKhamera eziKhatywayo
ISigma Corporation namhlanje yenza izibhengezo ezilandelayo:
Ukuqalisa Sigma fp, ikhamera yedijithali yedijithali engapheliyo kunye neyona nto elula kakhulu.
Ukuqaliswa kwe Uchungechunge olutsha olwenziwe ngokutsha lwentsebenzo lensalera engenamakhrikhi. Eyokuqala iya kubandakanya:
Sigma fp - Encinci kunye neNkcenkcazo yeNkcazo yeDiskrikhi epheleleyo
Ngobunzima be-112.6 × 69.9 × 45.3mm kunye nobunzima bomzimba be-370g, yonke entsha ye-Sigma fp yinkomfa yedijithali yedijithali encinane kunazo zonke. Ixhotyiswe nge 35mm I-sensor epheleleyo ye-Bayer kunye nee-megapixel ze-24.6 kumzimba oqokelelweyo. Ukulungele ukusetshenziswa kwansuku zonke ngabafaki-zithombe bazo zonke iigangatho zamanqanaba, ukusuka kwizakhono ukuya kwiingcali eziqondayo kakhulu, i-Sigma fp ivelisa imifanekiso enomgangatho ophezulu, onokukwazi ukuxhasa inkxaso emibini kunye nokucima.
I-Sigma fp yenzelwe iinjongo ngokuzinza kwengqondo. Uthuli lwaso kunye nomzimba onobungqina obuphambanisayo bwenza ukuba kube lula kwiiyure ezide kwiindawo ezahlukeneyo zokudubula. Ukungabikho kwe-shutter ye-mechanic kususa ubuninzi bomsindo kunye nokutshitshiswa kwe-shutter ngelixa ukunyuka ukunyaniseka. I-Sigma fp isebenzisa i-L-mount, ebonakaliswe ubude obude bombane, ububanzi obukhulu kunye nokuzinza okuphezulu. Ukongeza kwizinto ezikhethiweyo ze-Sigma lens, ezinye iilensi zenzibo zingasetyenziswa nge-L-Mount Alliance kunye neLeica Camera AG ne-Panasonic Corporation. Nge Sigma Mount Converter MC-21, iSigma SA intaba kunye neSigma Canon I-lf yentsimbi yeelensi ingasetyenziswa kwakhona.
Ngokuxhasa ukurekhoda kwangaphandle kwe-12-bit ye-CinemaDNG yevidiyo yevidiyo ye-RAW kunye ne-4K UHD / 24fps yokurekhoda, iSigma fp inakho ukuveliswa kwevidiyo epheleleyo. Ukutshintshana phakathi kwamanje kunye neendlela zokudubula kunokwenzeka nge-flip elula yomtshini. Imodi nganye ihamba kunye nenkqubo yokusebenza eyenziwe ngokukhethekileyo kunye neembonakaliso, okwenza kube lula ukugxila ekuqhubeni kwimodi nganye, ngaphandle koxinzelelo.
Ixabiso kunye nokufumaneka kwe-Sigma fp epheleleyo enekripthi yekhamera yedijithali yedijithali iya kuxelwa ukuwa kwe2019.
Iinkcukacha ezipheleleyo zeemveliso kunye neenkcukacha zobugcisa kunye nomfanekiso wesicatshulwa, nceda ubhekise kwisikhululo sokushicilela esisemthethweni Apha.
Iinkcukacha ezingakumbi zifumaneka kwi: www.sigma-global.com/en/cameras/fp-series/
I-Sigma High-Performance Lens Series yeeKhamera ezipheleleyo ze-Frameworks
I-Sigma Corporation yazisa okulandelayo i-Global Vision lens njengowokuqala kumgca wayo olungiselelwe ukwenziwa kweekhamera eziphezulu, ezipheleleyo.
kelly 35mm I-F1.2 DG DN Art
kelly 35mm I-F1.2 DG DN I-Art - I-First F1.2 I-Prime Lens yokuqala kwi-Sigma Global Vision Line
Sigma 35mm I-F1.2 DG DN I-lens ye-Sigma yokuqala ye-angle-angle nge-F1.2 ephezulu yokuvula isakhelo esipheleleyo Sony Inkqubo ye-E kunye ne-L-mount. I 35mm Ubugcisa beF1.2 buvumela ukubonakalisa ubuciko ngesisombululo esishukumisayo kunye nemiphumo ye-bokeh. Kukulungele ukukhangela izibhengezo ezibonisa ubunzulu obungabonakaliyo kwintsimi kubandakanywa imifanekiso yendalo, imitshato kunye neentlobo zendawo. Ukulungiswa kweekhamera ezipheleleyo, i 35mm Ubugcisa beF1.2 buquka izinto ezintathu ze-glass ze-SLD kunye nama-lens amathathu aspherical kuquka i-lens aspherical lens ehlelwe ngokufanelekileyo kwi-lens yokwakhiwa kwezinto ze-17 kumaqela e-12.
The 35mm Ubugcisa beF1.2 bulungiswe ngokufanayo kwimimandla yomibini kunye neendawo zokudubula ngevidiyo. Kwi-autofocus, i-Hyper Sonic Motor (HSM) enkulu inika i-torque efunwayo ukuqhuba iqela le-lens focus. Ukugxilwa kweengcebiso, umgca wokugxininisa uqhutywa yinkqubo yokugxilwa yocingo apho ukulungiswa kwesimo se-torque kusabela kwimisebenzi emihle yomfaki-zithombe. Umtshini wokuvula uphinde uphakanyiswe ngomsebenzi wokuchofoza, uvumele imisebenzi engenamigxobhozo eyona nto ibalulekileyo ngexesha lokudutshulwa kwevidiyo.
Sigma 35mm I-F1.2 DG DN I-Art izakufumaneka kwi-L-mount kunye Sony I-E-mount ngasekupheleni kukaJulayi 2019 nge $ 1,499.00 USD ngokusebenzisa abathengi abagunyazisiweyo base-US.
Iinkcukacha ezingakumbi zifumaneka kwi: www.sigma-global.com/en/lenses/cas/product/art/a019_35_12/.
I-Sigma 14-24mm I-F2.8 DG DN Art - I-Diameter ephezulu, i-Wide-Angle Zoom Lens ye-Astrophotography
I-lens ecacileyo ye-astrophotography, i-Sigma 14-24mm i-F2.8 DG DN Art yona mkhulu ububanzi obubanzi, i-zoom-wide-angle zoom yeekhamera zeekram epheleleyo. Ukufaniswa komsebenzi kunye nomgca ogqityiweyo kwisisombululo esiphezulu kufezekileyo ukufumana ukukhanya okubuthathaka okwenziwe yienkwenkwezi ebusuku. Ngokusebenzisa iziganeko zobungakanani besikhokelo esifutshane, esi sizukulwana esitsha sophawu lokulinganisa i-lens sidibanisa umzimba womzimba kunye nomgangatho wesimo esiphezulu.
Ezinye izinto eziphambili ze-lens ziquka enye yeglasi ye-FLD kunye neeklasi ze-SLD zeeklasi ezilungiselelwe ukucima umda wokukhawulelana ne-chromatic aberration. Amalensi amathathu aspherical, okubandakanya i-lens enkulu ye-aspherical lens ebusweni obuphambili, asetyenziswa ekunciphiseni ngempumelelo ukutshabalalisa kunye nezinye izinto eziphambukisayo ngokufezekisa isisombululo. Ukongezelela, i-motor dripping yenza isivinini esikhulu, imoto ye-AF enokuthula. Ukudubula kukhululekile nakwi-AF ekujoliswe kuyo njenge-Face / Eye Detection AF nangethuba lokudutshulwa kwevidiyo.
I-Sigma 14-24mm i-F2.8 DG DN I-Art izakufumaneka kwi-L-mount kunye Sony Hamba ngasekupheleni kweAgasti 2019 nge $ 1,399.00 USD ngokusebenzisa abathengi abagunyazisiweyo base-US.
Iinkcukacha ezingakumbi zifumaneka kwi: www.sigma-global.com/en/lenses/cas/product/art/a019_14_24_28/.
I-Sigma 45mm I-F2.8 DG DN Contemporary - I-Package Compact, i-Daily High-Performance Capabilities
Eyilungiselelwe ukusetyenziswa kunye neekhamera ezincinci ezingenakulingqakrazo zekhamera, i-Sigma 45mm F2.8 DG DN I-lens yesixazululo se-lens ebonakalayo kunye nekhono eliphezulu lokusebenza. Umlingani ococekileyo wemihla ngemihla kumfaki-zithombe ohambahambayo, le lensi enombundu ivelisa imiphumo evulekileyo ye-bokeh xa ivulekile. I-45mm F2.8 Contemporary iyakwazi ukunikezela ngokugqithisileyo namhlanje xa iphelile. Ngomncinci wokugxininisa we-24cm, abafoto beefoto nabo banokuzonwabisa kunye nokufakela iifoto zetrafti.
I-lens enamandla kakhulu ikwazi ukuhamba ngokukhawuleza, okuzolileyo kunye ne-high speed ye-AF eyenziwe ngokuhamba ngeenjini. Ikwaxhaswa noBume / Ubuso beeNkcazo AF kunye nevidiyo ye-AF.
I Sigma 45mm F2.8 DG DN Contemporary iya kufumaneka kwi-L-mount kunye Sony I-E-mount ngasekupheleni kukaJulayi 2019 nge $ 549.00 USD ngokusebenzisa abathengi abagunyazisiweyo base-US.
Ukufumana iinkcukacha ezipheleleyo zemveliso kunye neenkcukacha zobugcisa kunye nomfanekiso wesicatshulwa, nceda ubhekise ekukhutshweni kwe-official officially: www.dropbox.com/sh/4hb7e4cvs9dfmdh/AADOcDwkhp14gQcwlPoaCVu5a?dl=0
Iinkcukacha ezingakumbi zifumaneka kwi: www.sigma-global.com/en/lenses/cas/product/contemporary/c019_45_28/.
Malunga neSigma Corporation
Zobugcisa. Ukuchaneka. Ukuzinikezela. Ukususela kwi-1961, i-Sigma iye yazinikela ekuphandeleni ukuqhubela phambili iteknoloji yezithombe. Eyingqayizivele kumashishini, ishishini elinomndeni lenza umgangatho walo ophezulu, uzuze isabelo kunye neefilimi zekhamera ze-cinema, i-DSLR kunye neekhamera ezingenakuzibonakalisa, ukukhanyisa, iifayile kunye nezixhobo ezivela kwisixhobo sakhe sokwenza uphando lwezobugcisa e-Aizu , Japhan.
Kwi-2012, inkampani yazisa iSigma Global Vision ngemigca emithathu yecala ehlukeneyo: Ubugcisa, i-Contemporary neMidlalo. Yenzelwe iinkqubo zentambo zekhamera zentengiso kubandakanya Canon, Nikon, Olympus, Pentax, Sony kunye ne-Sigma, iilensi nganye isetyenziswe ngesandla kwaye ihlolwe eJapan ukuqinisekisa ukusebenza okuphezulu, umkhiqizo we-premium owenzelwe injongo yokugqibela. Kwi-2016, iSigma yangena kwihlabathi lokuvelisa i-lens lens. Ukugxininisa i-DNA ebonakalayo engundoqo echaze uphawu lwe-Sigma lokugqwesa, i-line lens ihlangabezana neemfuno ze-6k kunye ne-8k yokuvelisa i-cinema.
Ukwenza ummandla oyi-L-Intaba kunye neLeica nePanasonic kwi-2018, i-Sigma iyaqhubeka isithethe sayo esinobuchule bokugqwesa ukugqithisa. Ukuqaliswa kwe-11 i-Sigma Art lens kwi-L-Mount format ifomati ibonisa ukuzibophezela okuqhubekayo kuka-Sigma kuluntu lobugcisa ngokusebenzisa iminikelo yokwandiswa kwemveliso. Ngala ma-lens, abaphangi abangakumbi banokukwazi ukufumana ifomula eyaziwayo ye-Sigma.
I-Sigma iyaqhubeka isithethe sayo sokucinga ngokugqwesileyo nge-mirrorless sd Quattro, sd Quattro H kunye ne-compact dp yekhamera yekhamera. Ukuchonga isisombululo esiphezulu se-Foveon sensor, iikhamera ze-Sigma Quattro zenzelwe ukuvelisa umfanekiso ophezulu kunabo bonke.
Ukufumana ulwazi malunga neSigma, nceda u tyelele www.sigmaphoto.com okanye ulandele inkampani Sigma Blog, Twitter, Instagram kwaye Facebook.
UGraham Chapman uVikelelwa kuMhleli kelly sigma 14-24mm ubugcisa sigma 35mm ART sigma 45mm C sigma cine sigma corporation of america sigma fp sigma july sigma lens SoftAtHome, MStar, iCES2017 Iintetho kunye nemisrya I-Ultra HD Forum	2019-07-11
Previous: I-Christian Revival Church Implements AV Isisombululo kwi-Design Blackmagic
next: Ubugcisa Bokuba Ukwenza I-Beautiful Beauty izukise i-DPA Microphones